Fonosana fonosana sy kojakoja fitehirizana entana - mpanamboatra sy mpamatsy entana avy any Shina
Afaka manolotra serivisy fijanonana iray ho an'ny mpanjifanay izahay. Ireo kojakoja sy fonosana dia singa 2 lehibe hahatonga ny vokatra miavaka sy manintona kokoa. Safidy fonosana sy kojakoja maromaro azo omena. Ny fonosana sy ny kojakoja samihafa dia manome endrika hafa ny entana. Indrindra ho an'ny fonosana sy kojakoja manokana, manavaka ny marikao izy io. Afa-tsy ireo kojakoja efa misy, ireo fittings namboarina dia raisina an-tanan-droa ihany koa. Ianao ve efa tsy nahalala an'izay fonosana sy kojakoja ampiasaina? Mifandray aminay izao ho an'ireo sosokevitra arak'asa.